ကြက်ဥ အပြားကြော် easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကြက်ဥ အပြားကြော် easy cook
ကြက်ဥ အပြားကြော် easy cook
Posted by weiwei on Dec 14, 2010 in Food, Drink & Recipes | 8 comments
ကြက်ဥမွှေကြော်ကို အပြားမပျက်ပဲ ကြော်ဖို့ အိုးက အဓိကကျပါတယ်။ မကပ်တဲ့ non stick အိုးဖြစ်ရမယ် .. အိုးအပြားလဲ ဖြစ်ရမယ်။
– ကြက်ဥ (၃) လုံး
– ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ နံနံပင်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်မိတ် (နှစ်သက်ရာ)
– ဆား၊ ဆနွင်း၊ ဆီ အနည်းငယ်
အိုးထဲကို ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီး အိုးပူလာသည်အထိ ထားရမယ်။ ကြက်ဥကို ဆား ဆနွင်း (ဆနွင်းမထည့်လဲရသည်) အနည်းငယ်ဖြင့် ခေါက်ထားရမယ်။ ဆီပူလာပါက အိုးထဲကိုလောင်းထဲလိုက်ပြီး အပြားသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင် ပြင်ပေးရပါမည်။ အောက်ခြေအနည်းငယ်ကျက်လာမှ လှီးထားသော ပစ္စည်းများကို ဖြူးလိုက်ရမည်။ ထို့နောက် သတိအနေအထားဖြင့် တစ်ဖက်သို့လှန်လိုက်ရပါမည်။ အဲဒီနောက် ပန်းကန်ထဲ ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ …
သတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ ကြက်သွန်တွေကို ကြက်ဥနဲ့ရောခေါက်ပြီးမှ ကြော်လျှင် အရေထွက်သဖြင့် လှန်ရခက်ပြီး ကြေသွားတတ်ပါသည် …….
ကြက်ဥအုံးမလက် လိမ့်ရခက်နေသူအတွက် … အဆင်ပြေမယ့်စားနည်းပါပဲ..။
မဝေက အရောင်စပ်တာတော့ သတိထားပုံရတယ်..။ အ၀ါမှာ..အစိမ်းနဲ့အနီနဲ့..။ မျက်စိပါ အရင်စားနေသလားမသိ..။
အဲဒီအကြော်ကို ချိစ်အမျှင်(ပီဇာထဲထည့်တာ)လေးတွေပါ ဖြူးချလိုက်ရင်တော့ … စေးသွားပြိး ..ကွဲကြေရခက်သွားပါတယ်..။ အီတလီ-ပြင်သစ်အစားအစာမှာ အဲဒါမျိုးဆင်ဆင်ရှိတယ်..။
ငရုတ်သီးနီနီလေးတွေက ဆွေမျိုးမေ့အောင်စပ်တယ် …
အရင်တုန်းက တရုတ်လူမျိုးဆိုတာ အစပ်မစားဘူးလို့ ထင်ထားတာ တကယ်သူတို့အစပ်စားတာက ဗမာတွေ ကုလားတွေ အရှုံးပေးရမယ် … ဆိုင်မှာဟင်းမှာတိုင်း အစပ်လျော့ဖို့ သတိပေးရမယ် … မေ့ပြီးမပြောမိလို့ကတော့ စားလို့မရအောင်စပ်တော့တာပဲ …
အယ်လ်အေတရုတ်တန်းမှာ .. အရမ်းစပ်တဲ့တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တွေရှိတယ်..။
အသေမှတ်ထားတာတော … ဂျပန်လို မြစ်လို့ အဓိပါယ်ရတဲ့ .. အချောင်းလေးသုံးချောင်းပါတဲ့ တရုတ်နယ်ကအစားအစာဆို စပ်ပြီပဲ..။
ဒီမှာ ..ယူနန်စားသောက်ဆိုင်လည်းရှိတယ်..။ စပ်ချက်က… အစပ်ကြိုက်လှပါပြီဆိုတဲ့ မြန်မာတွေ ယူအက်စ်လည်လည်လာတော့ လိုက်ကြွေးလိုက်တာ.. လျှာထုံသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။
အဲဒီအစပ်တကာ့အစပ်တွေစားကြတာ… ဘယ်နားက ဘယ်နယ်လည်း..။
စီချွမ်ဆိုလား … ပြောကြသလားလို့..သေတော့ မသေချာပါ..။
တရက်ကတင်..သူတို့သုံးနေတဲ့ … င၇ုပ်ကောင်းစေ့လိုလို .. အစေ့လေးဝယ်လာသေးတယ်..။
တစေ့ချင်းက… ထုံသွားလောက်အောင် ပူရှိန်းရှ်ိန်းဖြစ်တာပါ..။
အဲဒါကို ..Szechuan pepper ခေါ်တယ်..။
မြန်မာပြည်မှာ သုံးတယ်တော့ မထင်..။ အင်ပို့ လုပ်စားကြည့်ကြဖို့ကောင်းတယ်..။
川 ကိုခိုင်ပြောတာ အဲဒီစာလုံးထင်တယ် … တရုတ်ပြည်မှာ အစပ်ဆုံးလို့ နံမည်ကြီးတာကတော့ စီချွန်ပြည်နယ် … စပ်တာက ပူပြီးစပ်တာ .. ဟွကျောက်လို့ တရုတ်လိုခေါ်တဲ့ ငရုတ်ကောင်းလိုအစိကြောင့် လျှာထူပြီးစပ်တာ .. စားလို့မကောင်းဘူး .. ဗမာတွေ ကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး …
တခြားပြည်နယ်တွေလဲ သူ့နည်းနဲ့သူ စပ်ကြတာပဲ … ကျွန်မရောက်ဖူးသမျှ ပြည်နယ်အားလုံး အစပ်မစားတဲ့နေရာ တစ်ခုမှ မတွေ့ဖူးဘူး … အေးလို့ အစပ်စားကြတာလို့ပြောကြတယ် … အရင်ခောတ်ထက် အခုခောတ်မှာ အစပ်ပိုစားတယ်လို့ တရုတ်လူကြီးတွေကပြောကြတယ် ..
တိဗက်က ငရုတ်သီးလဲ ဆွေမျိုးမေ့အောင်စပ်တယ် ..
ဘယ်ဆိုင်မှာမဆို ငရုတ်သီးကြော်ကို ပန်းကန်လိုက်ချထားတာ … ဘာပဲစားစား ခပ်ထည့်ပစ်လိုက်တာပဲ … လမ်းဘေးက အကင်ဆိုင်တွေလဲ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်တွေ ဖြူးပေးတယ် .. အာလူးကြော်ထဲလဲ ဖြူးထည့်လိုက်တာပဲ …
ဒီလောက်အစပ်တွေစားပြီး အသားအရည်ကောင်းနေတာတော့ ချီးကျူးစရာပဲ … တစ်ချိန်လုံး အစားနဲ့လက် မပြတ်တာတောင် ပိန်နေတာလဲ အံ့သြစရာပဲ ….
ငရုတ်ကောင်းလို လျှာထုံစေတဲ့ အစေ့ ကလေးတွေက အခု မာလာဟင်းလို့ လူတွေ နှစ်ခြိုက်စွာ စားနေကြတဲ့ အထဲမှာ ပါတယ်။ မြန်မာ အကြိုက် ပြုပြင်ထားတော့ အရမ်းကြီး မစပ်တော့ဘူးပေါ့..
ဆိုင်လား မဆိုင်လားတော့ မသိဘူး မဝေေ၀ရေ……..
မနက်က ဈေးထဲမှာ သီလရှင်တစ်ပါးက ဟင်းချက်တဲ့အကြောင်း ဘာလိုချက်ရင် ဘယ်လိုစားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောသံ ကြားတော့ ခင်ဗျားနဲ့ ဆူးမ ကိုသတိရလိုက်တာ
တရုတ်တွေ အစပ်စားတာ ခေတ်နဲ့အညီ ပြောင်းလဲလာတာထင်ပါတယ်။ အရင်ခေတ်က (နိုင်ငံဆင်းရဲတုန်းကမို့ဘဲလားမသိ) တရုတ်လူကြီးတွေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အပြုတ်တွေချည်းဘဲ (ဆီလဲမပါဘဲ) စားကြတာများတယ်။